डिज्नीकी स्टारले आखिर पोर्न फिल्म किन बनाउन थालिन् ? | Ratopati
कुनै समय डिज्नी टिभीकी चर्चित अभिनेत्री बेला थर्नले केही समय अघि आफू पोर्न फिल्म देखाउने वेबसाइट पोर्नहबसँग मिलेर काम गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । पोर्नहबलाई ‘रिभेन्ज पोर्न’ बाट टाढा राख्न आफू यससँग आबद्ध भएको जानकारी पनि दिएकी छिन् ।
हामी ओन्टारियोको सडबरीमा उनको भाडाको घरमा बसेका थियौं । यो विलासी घर एक शान्त इलाकामा छ जहाँ शरद ऋतुको आगमन हुँदासाथ म्यापलको पात झर्न सुरु भएको छ ।
थर्न तीन महिनाका लागि यहाँ आएकी छिन् । मिकी रुरकेसँग उनी फिल्म ‘गर्ल’ मा काम गरिरहेकी छिन् जसमा उनले एउटी यस्तो महिलाको भूमिका निभाइरहेकी छिन् जो आफ्नो गाउँमा गएर आफ्ना आफूलाई उत्पीडन गरेका पिताको हत्या गर्न चाहन्छिन् ।
हामीसँगको कुराकानीमा एउटा यस्तो समय आउँदा जहाँ बेला थर्न रुन थाल्छिन् । उनको एक घर पालुवा अष्ट्रेलियन शेपर्ड कुकुर, उनको घुँडाको चारैतिर चिन्तित भएर घुम्न थाल्छ ।
हामीले उनीसँग स्लट–सेमिङ, डिप्रेशन, सोसल मिडियामामा गरिने हिंसाबारे कुरा गरिसकेका थियौं । उनको अनुहार प्रयोग गरेर कति हजार पोर्न भिडियो बनाइसकेका छन् भन्ने विषयमा पनि कुरा भइसकेको थियो ।
यसबारे थर्नले भनिन्, ‘यस्ता कुराले मलाई निकै उदास बनाउँछन् । मलाई यो संसारै घृणा लाग्न थाल्छ ।’
तर यीमध्ये कुनै कुराले पनि उनको आँखाबाट आँसु निस्किएका थिएनन् ।
चाइल्ड मोडलको यात्राः
२२ वर्षीया बेला थर्नले संसारमाझ आफ्नो मन खोलिदिएको एक वर्ष पुगिसकेको छ ।
उनले आफ्नो जीवनमा उत्पन्न निराशा, एक्लोपन र यौन उत्पीडनको अनुभवमा आधारित निकै निजी कविता लेखिन् र यी कवितालाई सिरिजको रुपमा आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘द लाइफ अफ अ वानबी मुगल–मेन्टल डिसरे’ प्रकाशित गरिन् ।
उनका अनुसार उनी ९ वर्षको हुँदा एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा उनको पिताको निधन भएको थियो । उक्त घटनापछि उनको चाइल्ड मोडलको करियर निकै तीब्र रुपमा अघि बढ्यो र उनी डिज्नी च्यानलको कमेडी सिरियलमा देखिन थालिन् ।
उनी रोमान्टिक अटेन्शन पाउने चाहना र आफ्नो यौन जीवनलाई मिडियाले अत्यधिक महत्व किन दिइयो भनेर सोचमग्न हुन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘मेरो जीवनभरी नै यौन शोषण भइरह्यो, के यही कारणले यस्तो भएको हो त ? निकै कम उमेरमा सेक्ससँग मेरो सम्बन्ध गाँसिएको थियो । के यसै कारण मलाई लाग्थ्यो कि मसँग स्वभाविक रुपमा यही एउटा मात्रै कुरा छ त ?’
Photo: FB @BELLA THORNE
उनका कविताको संकलनमा उनले थुप्रै शब्दको स्पेलिङ गलत नै रहन दिइन् । उनको किताब प्रकाशन भएको केही हप्तापछि पनि अमेजनको बेस्टसेलरको सूचीमा समावेश भयो ।
यसै वर्ष जूनमा किताब प्रामोशनको सिलसिलामा उनी कतै बाहिर गएकी थिइन् । तब बेलाले एउटा यस्तो नम्बरबाट टेक्स्ट मेसेज पाइन् जुन उनले चिन्न सकिरहेकी थिइनन् तर उक्त सन्देशले उनको टाउको घुम्न थालेको थियो ।
बेला त्यतिबेलाको घटना स्मरण गर्दै भन्छिन्, ‘म एक अन्तर्वार्ताबाट बाहिर निस्किरहेको थिएँ । म लगभग रोइरहेकी थिएँ । किताब बारे कुरा गरिरहेको थिएँ । त्यतिबेला मैले आफ्नो फोन हेरेँ र त्यहाँ मैले आफ्नो नग्न तस्बिर देखेँ ।’
त्यो तस्बिर उनले आफ्नो पूर्व प्रेमीलाई पठाएकी थिइन् । तस्बिर देखेर बेलाको होस् उड्यो । उनले आफ्नो म्यानेजरलाई फोन गरिन् र त्यसपछि एजेन्टलाई फोन गर्न सल्लाह मागिन् ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहानै उनको फोनमा मेसेजको अलर्ट आयो । र अन्य थुप्रै टपलेस फोटो उनको इन्बक्समा आइसकेका थिए । यसपटक उनका केही चर्चित साथीहरुको पनि फोटो थिए ।
आफ्नो किताबमा बेलाले त्यो यौन उत्पीडनबारे पनि जानकारी दिएकी छिन् जुन उनले बाल्यकालमा झेल्नुपरेको थियो । यद्यपि, उनले यौन शोषण गर्ने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गरिनन् ।
आफूलाई कसैले पनि विश्वास नगर्लान् भन्ने कुराको पनि डर बसेको थियो उनलाई । त्यसकारण उनले त्यो अपराधबारे कसैसँग पनि कुरा गर्न आँट गरिनन् । टपलेस तस्बिर देखेपछि उनको दिमागमा पुनः एकपटक ती सबै कुरा चल्न थाल्यो ।
बेलाले सोचिन्, पुराना दिन पुनः दोहोरिने भए । उनी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्यो कि मेरो जीवनको डोरी अरु कसैको हातमा छ र तिनै व्यक्तिले मेरोबारे निर्णय लिइरहेका छन् । कसैले मलाई पुनः त्यहि गराउँदै जो म गर्न चाहँदिन, विशेषगरी सेक्स ।’
त्यसपछि उनले एउटा निर्णय गरिन् । उनले आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्मको प्रयोग गरिन् । ट्वीटरमा बेलाका ७० लाख फलोअर छन् । इन्स्टाग्राममा उनका फलोअर्सको संख्या २.२ करोड हो जबकी फेसबुकमा उनका ९० लाख फलोअर छन् ।
आफ्ना यी सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा बेलाले आफ्ना टपलेस तस्बिर सार्वजनिक गरिदिइन् । यसका साथै उनले ह्याकरको तर्फबाट पठाएको धम्कीपूर्ण मेसेजको स्क्रिनसट पनि सेयर गरिन् । साथमा उनले लेखिन्, ‘म यो यसकारण सार्वजनिक गरिरहेकी छु किनभने मैले निर्णय लिएकी छु कि तिमीहरुले मसँग मेरो केही पनि लिन सक्दैनौं ।’
यद्यपि, बेलाको यो निर्णयमा मानिसहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया आयो ।
अमेरिकी च्याट शो ‘द भ्यू’ की वूपी गोल्डबर्गले बेलाले यस्तो तस्बिर किन खिचाएको भनेर आलोचना गरिन् ।
गोल्डबर्गले यसबारे भनिन्, ‘यदि तपाईं चर्चित हुनुहुन्छ भने तपाईं कति वर्षको पुग्नुभयो त्यो मलाई पर्वाह छैन । तपाईंले नग्न तस्बिर खिचाउनै हुँदैनथ्यो ।’
गोल्डबर्गले आफ्नो कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा भनिन्, ‘जब तपाईं यस्तो तस्बिर खिच्नुहुन्छ तब त्यो क्लाउडमा जान्छ जसलाई सजिलै ह्याक गर्न सकिन्छ । यदि तपाईंलाई सन् २०१९ मा यो कुरा थाहा छैन भने माफ गर्नुहोस्, यो तपाईंको एउटा समस्या हो ।’
बेलाले गोल्डबर्गलाई यसको जवाफ इन्स्टाग्राममा नै दिइन् र उनको कमेन्टलाई घटिया र अपमानजनक बताइन् । बेलाले भनिन्, ‘मलाई यो कुराले यसकारण पनि बढी दुःखी बनाएको छ किनभने यो टिप्पणी यस्ती महिलाले गरेकी हुन् जसलाई म अत्यधिक सम्मान गर्दै आएकी छु ।’
कसरी बनाइयो फेक पोर्न भिडियो :
बेला थर्नका अनुसार जब युवा आफूलाई अपमानित र असुरक्षित महसुस गरिरहेका हुन्छन् तब उनीहरुको सार्वजनिक आलोचनाले उनीहरुको दिमागको स्थिती थप बिग्रन्छ ।
बेलाले भनिन्, ‘यदि कुनै युवा युवतीको यस्ता तस्बिर स्कूल, कलेजमा फैलिए उनीहरु आत्महत्या गर्ने बारे सोच्न थाल्नेछन् ।’
बेलाले आफ्ना जुन तस्बिर अनलाइनमा सेयर गरिन् ती उनका वास्तविक टपलेस तस्बिर हुन् जुन पहिलो पटक इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएको थियो । तर बेलाका यस्ता थुप्रै पोर्न भिडियो पहिलेदेखि नै इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् जुन वास्तवमा उनका होइनन् । यी सबै डिपफेक भिडियो हुन् जसमा सेक्स गरिरहेका कुनै अभिनेत्रीको अनुहारमा बेलाको अनुहार राखिएका छन् ।
यस्ता भिडियो बनाउने प्रविधिको माध्यमले मनोमानी परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हैरान र विचलित गर्ने एउटा भिडियोमा हस्तमैथुन गरिरहेकी एक महिलाको अनुहारमा बेलाको अनुहार राखिएको छ र त्यसमाथि रोएको आवाज राखिएको छ । यो आवाज बेलाको एउटा वास्तविक भिडियोको हो जसमा उनी आफ्नो पितालाई सम्झँदै रोइरहेकी थिइन् ।
बेला थर्नले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘यो भिडियो अत्यधिक फैलियो र सबैले उक्त भिडियोमा देखिएकी महिला म नै हुँ भनेर सोचिरहेका छन् । त्यसमाथि उनीहरुले यो भिडियोमा सबटाइटल राखेका छन्, ‘ड्याडी, ड्याडी !’
सर्वसाधारणसँग हुनेछ डिप फेक प्रविधीः
सफ्टवेयर डेभलपरले बीबीसीसँगको कुराकानीमा एउटा तस्बिरको माध्यमले यस्तो प्रकारको फर्जी भिडियो बनाउने प्रविधी एक वर्षभित्र सर्वसाधारणका लागि सजिलै उपलब्ध हुने बताएका छन् । यही कुरामा बेला चिन्तित छिन् ।
बेला भन्छिन्, ‘त्यतिबेला चर्चित हस्तीमाथि मात्र यस्तो हुनेछैन । कम उमेरका युवतीहरुको फर्जी भिडियो बनाउने सिलसिलाको वृद्धि हुनेछ ।’
बेलाका अनुसार यस्ता भिडियोको प्रयोग बदला लिन, ब्ल्याकमेल गर्न वा युवतीहरुसँग फिरौती माग्नका लागि गरिनेछ र यी महिलासँग मसँग भएजस्तो सोसल मिडिया प्लेफर्मको शक्ति पनि हुनेछैन जसको बलले उनीहरुले यसलाई झुटो प्रमाणित गर्न सकून् ।
त्यसपछि बेलासँग हामीले उनको निर्देशनमा बनेको फिल्मबारे कुरा गर्यौं । निर्देशकको रुपमा अडल्ट फिल्म ‘हर एण्ड हिम’ का लागि उनले अवार्ड पनि पाइन् ।
फिल्म निर्देशन गर्ने निर्णय लिनुको कारण बताउँदै उनले भनिन्, ‘किनभने इन्डष्ट्रिलाई महिला निर्देशकको आवश्यकता छ । यसले महिलाको यौनिकतालाई दर्साउने स्टोरीमा परिवर्तन देख्न पाइनेछ ।’
त्यसपछि मैले उनलाई बीबीसीले हालै गरेको एक अनुसन्धानमाथि प्रतिक्रिया दिन भने । उक्त अनुसन्धानमा बीबीसीले पोर्नहब वेबसाइटले ती फिल्मबाट नाफा कमाइरहेका छन् जुन फिल्मलाई कथित रुपमा रिभेन्ज पोर्न वा बदला लिनका लागि बनाइएको पोर्न भिडियो भनिएका छन् ।
पोर्नहबले ‘रिभेन्ज पोर्न’ बाट कमाइरहेको छ भारी नाफा
रिभेन्ज पोर्न ती भिडियो हुन् जुन साधारणतया जोडीले आपसी सहमतीमा अंतरंग पलका बेला सुट गर्छन् तर पछि उनीहरुलाई ब्ल्याकमेल गर्नका लागि वा ब्रेकअप भएपछि बदनाम गर्नका लागि सार्वजनिक गरिदिन्छन् वा पोर्न वेबसाइटमा सेयर गरिन्छन् ।
Photo: BELLA THORNE
बेलाले जब पहिलो पटक बीबीसीको रिपोर्टबारे सुनिन् तब उनको विश्वास डग्मगाएको देखियो । उनले भनिन्, ‘मलाई थाहा थिएन ।’
उनको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो । उनले भन्न थालिन्, ‘जब तपाईं कुनै कुरासँग जोडिनुहुन्छ तब तपाईंको कामले स्थितीमा सुधार आउँछ भनेर सोच्नुहुन्छ । मैले कोसिस गरेँ र मद्दत गरेँ तरपनि पुनः एकदिन यस्तो भएको थाहा हुन्छ...’
उनको आवाज रोकिन थाल्छ । मैले उनलाई पोर्नहबबारे पछि नै कुरा गर्दा पनि हुन्छ भनेँ । अनुसन्धान गरेर यसबारे जवाफ दिनसक्नुहुन्छ पनि भनेँ ।
उनले मलाई भनिन्, ‘म झुटो प्रमाणित होऊँ भन्ने चाहन्नँ । त्यसकारण यसबारे म आफ्नो पहिलो प्रतिक्रियामा कायम हुन चाहन्छु ।’
हाम्रो अन्तर्वार्ता पूरा भइसकेको थियो ।
होटलको कोठामा पुगेपछि मलाई थर्नकी असिस्टेन्टको मेसेज आयो । उनी मलाई एक कार्यक्रममा निम्तो दिइरहेकी थिइन् । कार्यक्रमको नाम थियो, ‘मेक श्योर योर फ्रेन्ड्स आर ओके ।’ यो डिप्रेशनविरुद्धको कार्यक्रम थियो ।
यो थोर्नका लागि महत्वपूर्ण लक्ष्य हो र उनी चाहन्छिन् कि उनका प्रशंसक यसबारे जानकार हुन् । तीन दिन पछि म उक्त कार्यक्रममा पुगेँ ।
बेलाले उक्त कार्यक्रममा भनिन्, ‘जब म हुर्किरहेको थिएँ तब वरिपरिका एकाध मानिसहरु डिप्रेशनका शिकार थिए । तर आज तपाईं जसलाई पनि हेर्नुहोस्, उनीहरु डिप्रेशनमा हुन्छन् । यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण त पक्कै होला । मेरो विचारमा यसको कारण हामी सोसल मिडियाको युगमा हुर्किरहेकाले हुनसक्छ ।’
जब म पार्टीबाट निस्किरहेकी थिएँ तब बेलाकी एकजना साथीले मलाई भनिन्, ‘तपाईंहरुको अन्तर्वार्तापछि उनले सिधा पोर्नहबलाई फोन गरेकी थिइन् र हामीले एक घोषणा गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।’
पछि त्यही हप्ता बेलालाई अडल्ड फिल्म ‘हर एण्ड हिम’ का लागि निर्देशकको रुपमा सम्मानित गरियो । यो सम्मान उनलाई पोर्नहब अवार्डको क्रममा नै दिइएको थियो । उनले पोर्नोग्राफिक फिल्ममा धेरै महिला निर्देशकलाई अपनाएकोमा एडल्ट फिल्म इन्डष्ट्रिका लागि धन्यवाद दिइन् यतिबेला बदला लिनका लागि राखिएका पोर्न भिडियोको अत्यधिक आलोचना पनि गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘म पोर्नहब सँग काम गरिरहेकी छु । यहाँ रिभेन्ज पोर्न रोक्नका लागि उनीहरुको फ्ल्यागिङ सिस्टम एल्गोरिदममा परिवर्तन ल्याउन चाहन्छु जसले हाम्रो समुदायका हरेक एक व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सकोस् ।’
मेघा मोहन र युसुफ एल्डिन /बीबीसी
#pornhub#revenge porn#disney star#bella thorne